I-China TY160-3 i-Bulldozer yoMvelisi kunye noMthengisi | Shehwa
I-TY160-3 i-bulldozer i-rigidozer, ukutshintsha kwamandla, ukulawula amandla okuncedisa, ukuqhuba umqhubi we-hydraulic ukulawulwa okulawulwayo, kunye nebhokisi yebhokisi yebhodi yeplanethi. Kukunye nekhabhathi ebutofotofo, umgca wangoku uyilelwe indawo zokugubungela kwaye uqinise ukuqhuba kokugqibela.
I-TY160-3 i-bulldozer i-rigidozer, ukutshintsha kwamandla, ukulawula amandla okuncedisa, ukuqhuba umqhubi we-hydraulic ukulawulwa okulawulwayo, kunye nebhokisi yebhokisi yebhodi yeplanethi. Kukunye nekhabhathi ebutofotofo, umgca wangoku uyilelwe indawo zokugubungela kwaye uqinise ukuqhuba kokugqibela. Isebenza ngokuvelisa okuphezulu, amandla okuhamba angcono, ukusebenza ngokulula. Isebenza ngokulula ukulungisa ngexabiso eliphantsi ngenxa yesakhiwo esilula kunye ne-6pcs track roller. I-bulldozer efanelekileyo esetyenziswa kwicandelo leoyile, ukutyala amalahle, inkqubo yendalo esingqongileyo kunye nendawo etenxileyo njl.
Ubunzima bokusebenza (kubandakanya i-ripper) (Kg): 16800
Uxinzelelo lomhlaba (kubandakanya i-ripper) (KPa): 65.6
Amandla eFlywheel (KW / HP): 131
Ubukhulu. torque (NM / rpm): 830 / 1000-1200
Ikaliwe ukusetyenziswa kwepetroli (g / KWh): 200
Uhlobo: Umkhondo yimilo engunxantathu.
I-sprocket iphakanyisiwe i-elastic emisiwe: 6
Inani labaqhubi beengoma (kwicala ngalinye): 2
IGiya 1st 2nd 3rd
Ngasemva (Km / h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
Imveliso yenkquboL / min: 170
Isiguquli seTorque: inqanaba le-3-inqanaba 1-isigaba-1
Idrayivu yokugqibela: Idrive yokugqibela kukuncitshiswa okuphindwe kabini kunye nezixhobo zecandelo kunye ne-segment sprocket, etywinwe ngophawu lwe-duo-cone.
Egqithileyo I-TY165-3 Bulldozer
Okulandelayo: I-SD6N Bulldozer
I-SD7 yeMisebenzi emininzi yeBulldozer